Njirimara na nguzo nke snow snow | Network Meteorology
O doro anya na ị nụtụla ma ọ bụ hụ ụfọdụ oke de nieve ma ọ bụ nkume. N’ọtụtụ fim ma ọ bụ ihe nkiri, ị pụrụ ịhụ otú nnukwu mmiri si akpata mbibi dị ukwuu, gbuokwa ụfọdụ ọnwụ n’ihi olili na iku ume. N'isiokwu a, anyị ga-amata n'ụzọ miri emi etu nnukwu mmiri si arụ ọrụ yana nsonazụ ọ nwere. Enwere usoro ọ bụla nke ịnwe ma ọ bụ mgbochi nke ihe omume ndị a?
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, ị ga-anọgide na-agụ isiokwu a n’ihi na anyị ga-agwa gị ihe niile n’ụzọ zuru ezu.
1 Nkọwa na njirimara
2 Ihe na-akpata nnukwu mmiri
3 Dị na mmetụta nke nnukwu mmiri
Tupu ịmara ihe nsonaazụ ọ nwere ike ịnwe ma ọ bụ otu esi akwụsị ya, ọ dị mkpa ịmata ihe nnukwu mmiri bụ. Kacha nkịtị bụ na ọ bụ a snow snow. Ọ bụ ihe nnukwu mmiri nke snow nke, n'ihi nchịkọta ya, na-ada daa site na ugwu. Ọ bụ mkpọda ya na mkpokọta snow na-eme ka snow na-ebute site na ịdị arọ ya. Ka anyị ghara ichefu na ike ndọda na-aga n’ihu ime ihe ya ma na-adọkpụ snow niile ruo ebe dịkarịsịrị ala.
Njirimara bu nnukwu uzo bu oke ngwangwa na etu ha si agha. Ma ha buru otutu snow, nkume, uwa, ice, wdg. Mgbe anyị na-ezo aka na oke nnukwu ọ bụ oke nkume na mkpọda nke, maka ihu igwe anụ ahụ ma ọ bụ kemịkalụ, ọ na-agwụsị ma mebie n'ihi mmetụta nke ike ndọda.
N'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ na ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị adọrọ mmasị eke ihe na-ahụ, ma n'otu oge ahụ dị nnọọ ize ndụ. Ọtụtụ ndị na-agba ọsọ nwere ike iji ọsọ na enweghị agamnihu na-agbada. O sina dị, ọsọ nke nnukwu snow dara na-agbakarị ọsọ ọsọ.
Ọ bụrụ na oke mmiri anaghị adaba ma guzobe na mkpọda, mgbe ọ na-ada, ọsọ ya na-abawanye ka ọ na-agbadata na elu. Zụ ọ na-eme dị ukwuu ma na-ada n'akụkụ ugwu ndị ọzọ. Mgbe ọ kwụsịrị na-adọta na ala ebe mkpọda ahụ belatara, ọ na-akpata nnukwu igwe ojii nke akpụrụ mmiri nke na-esi na mmetụta ahụ pụta. Ngwurugwu ice ndị a mechara gbasasịa na ikuku wee gbazee.
Ihe na-akpata nnukwu mmiri
Snow snow nwere ike ịkarị otu nde tọn. Were ya na ị na-eji nwayọ na-egwu ọsọ na-anụ ụtọ echiche na adrenaline nke na-agbadata na nnukwu ọsọ na-akpata ma ị chọpụta na otu nde tọn snow na-achụ gị. Nsonaazụ dị njọ. Imirikiti ndị na-egwu ski ndị mechara nwee nnukwu snow nwụrụ na-anwụ n'ime ya.
Na mgbakwunye, ọ bụghị naanị na ị ga-anwụ n'ihi na e liri gị, mana ị ga-eburu n'uche na otu nde tọn ajụla oyi na ị na-arịa hypothermia. Ma gini bu ihe kpatara otutu ahihia? Maka ihe omume dị otú ahụ ịdị adị, achọrọ nnukwu snow. Snow juru n’elu otu mkpọda bụ ihe na-akpali akpali nke na-ebute oke ọdịda.
Ha na-etolite na slopes na otu akụkụ nke udiri n'etiti ogo 25 na 60 na mkpọda. Ọ bụ na nke a ebe, mgbe a na-echekwa snow, ọ nwere ike ịdọrọ site na ike ndọda. Ma ihe ọzọ dịkwa mkpa maka ịhazi nnukwu mmiri ahụ bụ na e nweela oke mmiri ozuzo nke nwere ike ịchekwa ihe dị ka sentimita 30 nke snow ruo na obere oge. A ghaghị ịchekwa snow ọ dịkarịa ala awa 24 ya mere na, site na mkpakọ, ọ nwere ike ịda dịka anyị na-ebuwanye ibu.
Nkekọ dị n’etiti oyi akwa snow kwesịrị ịkpa ike ka ha wee ghara ịkwụsi ike. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị, mgbe snow na-ejupụta, e nwere oyi akwa nke na-ejighị n'aka. Mgbanwe ihu igwe na mberede na mpaghara ahụ bụ ihe na-akpata nnukwu mmiri. O nwekwara ike ịbụ ọdịda nke osisi, obere ala ọma jijiji ma ọ bụ oke mkpọtụ dị ka okwu ngosi ma ọ bụ oke okwu.
Dị na mmetụta nke nnukwu mmiri
Mgbe nde tọn snow dara n'ala ọ na-emesịa kọwaa. Dabere n'ụdị nnukwu mmiri nke ike na ụfọdụ njirimara ndị ọzọ na-achịkwa, e mepụtala ọkwa iji mee ka ọ dịkwuo mfe ịmata na ịmụ ihe. Anyị na-eke ha n'ime:
Akwa avalanches. Ndị a bụ ndị e guzobere n'ihi usoro oyi na-adịghị ike nke a na-ahụ n'akụkụ ala ugwu, ma, mgbe ọ na-agbaji, nnukwu ebe snow na-agbada na mkpọda.
Wet snow snow. Ndị a bụ ndị nke snow na-agagharị n’ọsọ dị ala, mana snow dị oke ike.
Avalanches nke ntụ ntụ snow. Typedị a bụ nke na-etolite nnukwu igwe ojii nke uzuzu snow nke na-efegharị ọsọ ọsọ na njem dị ogologo.
Enwere ọtụtụ mmetụta na-adịghị mma nke nnukwu mmiri na-akpata mgbe ị na-ewere ọnọdụ na mpaghara. Nke mbu na nke di nkpa bu ili nnukwu ala ebe mmadu, anumanu, osisi, ulo, wdg. Ọ na-ebibi ọtụtụ ihe ndị e kere eke dị na gburugburu ya, yana ihe ijuanya na ọ nwere ike ibute ifufe dị ike na-efegharị mgbe ọ na-atụgharị ikuku.
Nsonaazụ kachasị pụta bụ nchapu ụgbọ, ịda nke osisi na mbibi nke ụlọ. Ha bụ n'ezie ihe omume dị oke egwu nke a ga-ezere n'agbanyeghị ihe ọ bụla.
Ihe ize ndụ nke nnukwu mmiri na-abawanye mgbe ndị na-agba ọsọ na-agba ọsọ ma na-ezute otu n'ime ihe ndị a. Nke a siri ike igbochi ma buo amụma, yabụ ọ bụrụ na ọ tụrụ gị n’anya na snow na-agba ọsọ, ị mechara. Otú ọ dị, lee ụfọdụ ịmata ihe ndị metụtara isiokwu a:
Kwa afọ ihe karịrị mmadụ 150 na-anwụ site na nnukwu mmiri.
O kwere omume ịnapụta ndị ahụ emetụta ma ọ bụrụ na i wepụ ya n'ime oge nke 15 na oke ihe ịga nke ọma nke 93% nke ihe ịga nke ọma.
Onu ogugu ndi mmadu gburu site na nnukwu mmiri karia ikuku nsi na agha Worldwa Mbụ.
Oge afọ ha na-agakarị bụ n’oge udu mmiri na udu mmiri.
Enwere m olileanya na ozi a na-enyere gị aka ịmụtakwu banyere isiokwu ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Avalanches
Akụkọ banyere kpakpando Perseus